Ra?isal wasaare shirdoon oo gaaray Yeman isagoo maanta la kulmaya madaxda sare sare ee dalkaas – Radio Daljir
Seteembar 9, 2013 2:17 b 0
Sanca, September 9, 2013 – Ra?isal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa ?xalay gaaray magaalada Sanca ee dalka Yeman, halkaas oo isaga iyo wefdiga ay ku tegeen booqasho rasmi ah iyo casumaad ay ka heleen Yeman.
Mudane Shirdoon ayaa isaga iyo wefdigiisa waxay si buuxda u bilaabeen safarkooda Yeman, waxaana sii diiran xalay loogu soo dhoweeyey magaalada Sanca.
Ra?isal wasaaraha ayaa kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda dalka Yeman, isagoo la filayo in uu kala hadlayo, cilaaqaadka labbada dhinac, amaanka iyo dib u dhiska, sidoo kale wuxuu kala hadli doonaa xaalada qaxootiga.
Docda kale warar aan helayno ayaa sheegaya in wefdiga ra?isal wasaaraha ay la kulmayaan inta ay joogaan dalka Yeman, Ganacsatada kala duwan ee Soomaalida ah isla markaasna jooga dalka Yeman.
Ra?isal wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa soo afmeeray booqashadiisii dhowrka maalmood ahayd ee uu ku joogay dalka Jabuuti, safarka ra?isal wasaaraha ayaa ka bilowday Saudi Arabia welina waa uu socdaa.
Madaxweyne Xasan sheikh oo qeybaha bulshada iyo maamulka Hiiraan kala hadlay dib u heshiisiinta